Ngaba ixesha lisondele xa i-iPad Pro ilandelayo isebenza kwi-MacBook? | Ndisuka mac
UPedro Rodas | | iapile, Izaziso, Iikhompyuter zeMac
I-Apple mva nje inika ukubaluleka kakhulu kuyo iPad Pro Kwiividiyo ezahlukeneyo azipapashileyo kwisitishi sakhe seYouTube apho engayeki ukuthi i-iPad Pro yeyona ndawo ifanelekileyo yokutshintsha indawo yekhompyuter. Sonke siyazi ukuba i-iPad Pro lukhetho oluhle kakhulu onokusebenzisana nalo kodwa, ngenxa yenkqubo ye-iOS, isekude kakhulu kunaleyo sinokusinikwa yiMac.
Nangona kunjalo, abo baseCupertino banokulungiselela uluntu utshintsho kwiinkqubo zombini zeMac kunye nakwizixhobo ze-iOS ezinje nge-iPad kwaye oko kukuthi, ukongeza kupapasho lobunikazi apho i-iPhone yayisetyenziswa njengeyona iphambili yelaptop, I-Apple iyaqhubeka kwaye ibhobhoza ngolwazi malunga nokuba i-iPad Pro ijongeka kanjani kwaye inokubonisa ntoni.
Ngaba i-Keynote yokuqala eya kubanjelwa e-Apple Park iya kukhethwa ukwazisa ngemveliso elandelayo etshintsha umdlalo? Kucacile ukuba imakethi yezixhobo eziphathwayo iyanda kwaye ibona ukhetho olunikezelwa yiSamsung ngeGPS S8 kunye ne-S8 + ukuze iselfowuni ibe yikhompyuter ngokusebenzisa isixhobo esinokusenza sicinge ukuba I-Apple ikwafunda oku kunokwenzeka kwindalo yayo.
Ngoku, into esifuna ukuyibonisa kweli nqaku kukuba ingaba isizukulwane esikhulu se-iPad Pro siya kuba njengePro njengoko kulindelwe kwaye iya kuba sisihlandlo sokuqala ukuba umsebenzisi enze ngaphandle kokuthenga iMacBook yokuthenga i-iPad. Amaxabiso e-iPad Pro ayasondela kwinto esinayo kwi-MacBook Air okanye kwi-MacBook 12 intshi kwaye ngenxa yeso sizathu, Ukongeza kwinani lezipapasho ze-iPad Pro esizibonayo, ukuphuculwa okunokwenzeka kwento ethethwa ngumbono we-Pro Pro kuza engqondweni.
Yonke into ibonakala inonxibelelwano kwaye kukuba emva kokuba iApple ishenxise usapho lomoya we-iPad kwikhathalogu yayo ukuyiguqula yabuya nje kwi-iPad, ifuna ukwahlulahlula kakhulu umxholo we-Pro Pro kwi-iPad okanye kwi-mini mini ye-iPad. Ngaba ucinga ukuba iApple ihamba ngale ndlela? Ngaba i-Pro Pro iya kuba yinto enokuqwalaselwa endaweni yeMacbook? Andazi, kwaye andikaze ndikwazi ukuba nemveliso endinayo nge-MacBook yam ene-12 intshi ene-iPad, Kuyinyani ukuba andikaze ndisebenze ixesha elide nge-12'9-intshi iPad Pro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Ngaba ixesha lisondele xa i-iPad Pro ilandelayo isebenza kwi-MacBook?
I-Telegram ihlaziywa kwi-Mac kunye nesicelo esibhalwe kwakhona kwi-Swift 3.0